Ayikho Indwangu Elukiwe
Ukuzilibazisa okudala kwezindwangu zokwakha izingubo
Ukwakhiwa kabusha kwezindwangu kungashiwo ukuthi kungumklamo wesibili wendwangu yezingubo. Kusho ukucubungula kwesibili kwezindwangu eziqediwe ngokusho komklamo kudinga ukukhiqiza imiphumela emisha yobuciko. Kukwandiswa komcabango womklami futhi kunemisha engenakuqhathaniswa. Kwenza ...
1. Iqhwa le-chiffon lokufakelwa alitholakali endwangu yokugqoka yasehlobo, eyenziwe ngezinto zamakhemikhali, yilona isondo lezinto zokusetshenziswa. I-Chiffon indwangu engamelana nemibimbi ephelele, futhi umzimba ongaphezulu unobuhle, elengayo lemvelo, umuzwa opholile noqabulayo, ukuthi ungagqoka kanjani ukuthi muhle kanjani. Kepha chiff ...
Izinto zemvelo ezimsulwa
1. Izindwangu zelineni Izindwangu zelineni, ngokungadingekile ukusho, yizimpahla ezifika ehlobo. Ivumela isikhumba ukuba siphefumule, kepha futhi okuphefumula kakhulu akukuniki izithukuthuku eziminyene, akunankinga kagesi ongaguquguquki, futhi okuthambile ukuthinta, abantu abalwa negciwane banobungane ikakhulukazi. Ngaphezu kwalokho, indwangu uqobo ex ...
Igumbi 13A03, iGuoda Chain Business Building, NO173 Shuiyuan Street, District Xinhua, Shijiazhuang, Hebie, China